Instagram Fonts: Generator, Symbols, Emoji, Online Copy Ary Apetaho
Endritsoratra for Instagram
Ao amin'ny tranonkala ny toerana ho hitanao be dia be endritsoratra vaovao mba ho ampiasaina ao amin'ny Instagram. Misy fantina endritsoratra lehibe ho an'ny Instagram. Ankoatra ny fitsipika endritsoratra, no ahazoana tsara tarehy misy endri-tsoratra ho an'ny Instagram ny safidy. Ny asa soratra sy ny andinin-teny eto namorona azo adika ary nampidirina tany amin'ny tsipika ny Instagram profil, na raha toa ka ny anaram-pikambana na ny toerana, na ny mombamomba sasin-tenin'ny tantara, na ny lahatsoratra fanehoan-kevitra. Ankoatra izany, isan-karazany azo ampiasaina endritsoratra ao amin'ny vohikala: nanasongadina, sahy, na strikethrough sora-mandry.
Ahoana no mba hamoronana tsara tarehy endri-tsoratra
Mba mampiasa endritsoratra solontena tao amin'ny vohikala ao amin'ny Instagram profil, dia tsy maintsy manoratra ny soratra takiana ao amin'ny toerana manokana varavarankely sy mifidy izay endri-tsoratra no tiany. Avy eo ianao dia ho afaka ny handika ny lahatsoratra ao amin'ny karazana taratasy tsara tarehy avy any amin'ny toerana. Noho izao fikasana ianao dia ho afaka hanampy vaovao endritsoratra ny Instagram ary irery mamaritra ny mombamomba azy. Mampiasa ny tranonkala toerana dia afaka hanova ny endritsoratra ao amin'ny Instagram na ao amin'ny mombamomba azy sy ny sasin-tenin'ny lahatsoratra na ny fanehoan-kevitra.
Amin'ny tontolo ankehitriny dia mila marika famantarana manokana, mba hahatonga ny lahatsoratra tena miavaka raha mitoraka bilaogy ao amin'ny Instagram. Afa-tsy isan-karazany ny lahatsoratra, dia hahita lehibe miendrika marika isan-karazany ho an'ny Instagram. Ohatra, dia avy eto ianao dia ho afaka handika ny mifidy ho mariky ny Instagram solonanarana. Ho afaka handika izay marika ho Instagram fa tianao ny hanampy ny mombamomba azy avy amin'ny tranonkala toerana.
Mba hanaovana drafitra ny votoaty raha mitoraka bilaogy ao amin'ny Instagram hahafantatra marika maro azo ampiasaina raha Instagram fanoratana ny lahatsoratra, mameno ny anarana na ny sasin-tenin'ny mombamomba azy. Noho izany, ny fomba fanehoana an'ohatra maro no manana ny lahatsoratra Instagram?
Instagram dia tambajotra sosialy ny sary kokoa noho ny soratra; noho izany, ny lahatsoratra boky dia voafetra ihany. Ny fetra dia 2.200 marika isaky ny lahatsoratra. Ary firy no profil marika sasin-tenin'ny tafiditra amin'izany? Tsy maintsy mifanaraka amin'ny vaovao ilaina amin'ny 150 marika mba hanampy ny vaovao ho any amin'ny sasin-tenin'ny profil. Ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Instagram manana ny marika voafetra ihany koa; dia tsy afaka ny hanoratra fanehoan-kevitra fohy kokoa noho ny fanehoana an'ohatra roa, ary mihoatra ny 1000 marika.
Azonao atao ihany koa ny mamorona ho an'ny Instagram emojis samihafa eo amin'ny Internet. Afaka manampy emojis namorona Tranonkalanay ao Amin'ny Internet ao amin'ny Instagram na lahatsoratra sy tantara.
Ny toerana ihany koa dia manana anjara asa tsy mahazatra ny famoronana Emoticons for Instagram. Afaka mahita lehibe emoticon mitambatra ho an'ny famaritana profil. Ny lamin 'ny fanampiana Emoticons ny lahatsoratra na ny tantara dia mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny lahatsoratra iray sy emojis: ny emoticon dia tokony ho tonga avy any amin'ny vohikala ka napetany any Instagram.
Ny foto-kevitra miasa ao amin'ny Internet dia mifototra amin'ny famoronana ny fomba isan-karazany samy hafa mampiasa Unicode marika. Noho izany ara-teknika ny tranonkala toerana dia tsy mamorona endritsoratra, fa Mitambatra ny Unicode glyphs mifanaraka amin'ny Instagram. Inona no atao hoe Unicode Instagram?
Fanazavana ny ordinatera rehetra dia voatahiry ao mimari-droa endrika (isan-karazany sy ny tsikombakomba ny zeros ireo). Na ny lahatsoratra fa amin'izao fotoana izao ianao mamaky teny dia voatahiry ao amin'ny lohamilina ho toy zeros sy ireo. Tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana ny solosaina mpanamboatra samy nanana ny heviny momba ny fehezan-dalàna mimari-droa ho ampiasaina dia ny mba hanehoana lahatsoratra isan-karazany fanehoana an'ohatra.
Tamin'ny taona 1980 ny fehezan mimari-droa dia penitra noho ny Unicode. Unicode dia penitra iraisam-pirenena manerana izao rehetra izao fahefana miasa amin'ny famaritana ny teny marika.
Talohan'ny Unicode niseho, programa rehetra nampiasa ny fomba fitehirizana sy mamaly soratra; Noho izany, isaky ny fandaharana roa rehefa namorona ny rindrambaiko samihafa tsy maintsy miara-miasa, ny «mpandika teny» dia tsy noforonina.
Noho ny zava-misy fa amin'ny ankapobeny tetezamita fenitra dia tena sarotra fa tsy orinasa rehetra te fitaterana ny rafitra iraisana-dahatsoratra mariky Coding, Unicode maintsy hampihatra ny andian-marika isan-karazany mba hanohanana ny rafitra, anisan'izany ny lany andro. Tsy ela ny isan'ny tandindona Amin'ny exponential nitombo ny tahan'ny, ary amin'izao fotoana izao dia ana hetsiny. Ny lahatsoratra Emoticons dia fanehoana an'ohatra koa; noho izany, izay rehetra miseho isan'andro Emoticons nitranga Unicode ihany koa.
Ny voalohany Unicode marika 128 no marika ASCII sary famantarana izay abidy latina. Unicode dia ahitana fa mihoatra lavitra noho ny 128 ny fanehoana an'ohatra sy ny maro amin'izy ireo endri-tsoratra latina mitovy, fa hanana fahasahiana taratasy momba ny fahasamihafana na ny lamina. Ireo marika azo ampiasaina mba hamoronana «pseudoalphabets» mitovy marika ASCII lahatsoratra tsotra, fa manana fahasamihafana sasany: ho sahy kokoa, voasoratra ao sora-mandry, mitsongoloka na nanasongadina!
Ny «Font» teny raha ny marina dia midika hoe ny andian-sary isan-karazany, na mifanaraka amin'ny Unicode glyphs sasany. Tsy maintsy efa nandre momba ny Comic Sans sy Arial, izay endritsoratra. Ny zavatra niteraka noho ny tranonkalantsika raha famoronana andininy, emojis na Emoticons, ary koa ny vaovao fa mandika ary apetaho, rehefa mampiasa ny Internet, dia tena tandindona eo amin'ny isaky ny endri-tsoratra. Noho izany, teny natao sora-mandry sy ny tsipiriany hafa taratasy fa mamorona ny hampiasa azy io ao amin'ny Instagram Profile no tena misaraka marika, toy ny taratasy A sy B, ohatra.
Noho izany, nahoana no ireo endritsoratra manokana Tranonkalanay ao Amin'ny Internet ilaina? Raha olon-tsotra no nisolo tena endritsoratra eto, ianao dia tsy ho afaka handika ary apetaho ho azy ireo! Ohatra, ianao, dia tsy ho afaka ny ampidiro ny sasany teny Comic Sans ao amin'ny Instagram mombamomba, satria ireo marika mandika marika ASCII dia ho tsotra ny fanehoana an'ohatra sy ho hita taratra amin'ny toerana sasany toy ny tapa-kevitra ny tompon'ny toerana.
Na izany aza, raha mampiasa ny andian-Unicode marika izay mitovy sasany endri-tsoratra, na dia ny sasany fomba (fahasahiana, nampiana, nanasongadina na mitsongoloka, ohatra), dia ho afaka hampiasa toy izany andinin-teny ho «Tahafo» tsara tarehy endritsoratra ao amin'ny profil sasin-tenin'ny na ao amin'ny Instagram lahatsoratra.